Muqaadaraad fara badan oo gacanta lagu dhigay 2016 - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Muqaadaraad fara badan oo gacanta lagu dhigay 2016
La cusbooneeyay torsdag 16 februari 2017 kl 14.42
La daabacay torsdag 16 februari 2017 kl 11.01
Kontarobaanka qaadka lagu qabto oo kor u kacay
Muqaadaraad ay ciidanka xuduuddu gacanta ku dhigeen. sawir: Jessica Gow/TT
10% ayey kor u kaceen muqaadaraadka ey ciidammada xuduudaha Sweden ku qabtaan muqaadaraadyada kala duwan sannadkii 2016 kolka loo barbar-dhigo sannadkii ka horreeyay ee 2015.
Ciidanka xuduudda ayaa sannadkii ina dhaafay 2016 gacanta ku dhigay
7 318 jeer muqaadaraad. Kuwaasina oo badankood laga qabtay gawaarida waawayn ee xamuulka iyo konteeynarrada.
– Waxaannu xoogga saarney sidii aannu baaris ugu sameeyn lahaeyn alaabooyinka dalka soo gala ee gawaarida xamuulka, waana mid ka muuqata natiijada middaa laga gaaray, sida ay sheegtay Therese Mattsson ahna madaxa hayadda ilaalinta xuduudaha ee lagu magacaabo - Tullverket.
– Waa tiro saddex jeer ka badan kolka loo barbar-dhigo sannadihii ka horreeyey. Halkaasina oo ey ka muuqato inuu dalka ka jiro suuq ballaaran ee muqaadaraadka loo isticmaalo iyo marka laga hadleyo caalamka..
Dhanka kale waxaa hoos u dhacay tirada muqaadaraadka ee amfetamin iyo kokain sannadkii ina dhaafay inkasta oo ay kor u kacday tirada la qabtay ama gacanta lagu dhigay. Sidoo kale waxaa kor u kacday tirada muqaadaraadka heroin ee la qabtay, 2.6 kiilo sannadkii 2015 halka ay sannadkii 2016 kor u dhaaftay 31,3 kiilo. Waana tiro kor u kacday 1 100%.
– Heroin waa muqaadaraad aannu aragney inuu kor u kacay sannadihii ugu dambeeyey, sida ay sheegtay Therese Mattsson.
Kolka laga yimaado kor u kaca muqaadaraadka lagu qabto gawaarida xamuulka waxaa sidoo kale kor u kacday tirada muqaadaraadka la qabto ee la isugu soo diro boostada oo inta badan loo soo diro shakhsiyaad ama laga dalbado shaashadda internet-ka.
Sannadkii 2016 ayuu gaaray heerkii ugu sarreeyay iyadoona gacanta lagu dhigay muqaadaraadyo noocaasi ah 4 100 jeer. Waana tiro u dhiganta 11 jeer maalintii.
Kharashka dawladda uga baaqda dembiyada muqaadaraadka iyo isticmaalkooda kolka laga eego muqadaaraadyada la qabto dhibaatooyinka ey geey-san lahaayeen ayaa lagu qiyaasaa 1,5 bilyan oo koronka iswiidhishka ah. Waa tiro 300 oo malyan ka sarreeysa kolka loo barbar-dhigo sannadkii ka horreeyey.
– Muqaadaraadyada aannu xuduuddaha ku joojinno, ayey haydaha kale ka maarmaan iney ka howl-galaan haddii ey dalka soo geli lahaayeen, sida ay sheegtay Therese Mattsson, agaasimaha guud ee hayadda ciidanka ilaalinta xuduudaha oo u warrameeysay laanta wararka ee Ekot.
Geeska Afrika ayaa inta badan laga cunaa maandooriyaha qaadka
torsdag 16 februari 2017 kl 16.48